Everest's 'deadliest day ever': Up to 18 climbers and sherpas feared dead, including Google executive, in avalanches caused by huge earthquake that killed at least 2,200 people across Himalayas -
Dan Fredinburg, who used to date One Tree Hill actress Sophia Bush, suffered fatal head injuries while climbing on Saturday. He was one of 17 confirmed dea...
ပြင်းအား ၆.၇ ရှိ နောက်ဆက်တွဲငလျင် လှုပ်ခတ်၊ နီပေါ နဲ့ အိန္ဒိယမှာထိတ်လန့်
အင်အားကြီးငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေ ကြုံတွေ ခံစားနေရတဲ့ နီပေါ နဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက အင်အား ၆.၇ ရှိတဲ...
Malaysia taxi app ready to take neighbours by storm
Story of MyTeksi, used to book taxis without hassle, seen as example of what can be achieved in Asia Pacific markets.
Nepal: Fresh tremors halt air rescue operations
The strong aftershock experienced on Sunday afternoon have impacted the ongoing rescue and relief operation mounted by Indian airlines.
Strong aftershock hits Kathmandu
CNN's Robyn Curnow was talking to Kushal Neogy in Kathmandu, Nepal, whena6.7 magnitude aftershock struck.
ITANAGAR, India — Nearly 24 hours afteradevastating earthquake shook Nepal, killing more than 1,900, workers were still trying to rescue victims in rural...
'SADNESS SINKING IN': Big aftershock rattles Nepal as aid begins to arrive
ဧပြီလ ၂၆ ရက် ၂၀၁၅ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ရပ်စောက်မြို့နယ်တွင် တရားမဝင်သစ်စက်များကြောင့် မတ်ခ်ျလ ၃၀ ရက်နေ့မှ စ၍ သစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း ထား ခိုင်းခြင...
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးနီးပါး လက်ခံဟု ဦးအေးမောက်ပြောကြား
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အရေးကြီးဆုံးပုဒ်မဖြစ်သည့် ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးကို အာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးနီးပါးက လက...